Polyethylene glycol 20000 - Njirimara Ngwaahịa a bụ ihe na-acha ọcha. Soluble na mmiri, soluble na ụfọdụ organic solvents. Ihe ngwọta ya nwere nnukwu viscosity na mgbatị dị ala, enwere ike ịhazi ya site na ịkọkọ ihe, ịmịpụ na nkedo. Ọ bụ resin thermoplastic nwere ezigbo ndakọrịta na resins ndị ọzọ. Ọ na-eguzogide ọgwụ mbuze nke nje ma nwee adịghị ike hygroscopicity na ikuku. Polyethylene glycol 20000 - Standard Ngwaahịa a bụ ngwakọta nke ethylene oxide an ...
Polyethylene glycol 10000 - Njirimara Ngwaahịa a bụ ihe na-acha ọcha. Soluble na mmiri, soluble na ụfọdụ organic solvents. Ihe ngwọta ya nwere nnukwu viscosity na mgbatị dị ala, enwere ike ịhazi ya site na ịkọkọ ihe, ịmịpụ na nkedo. Ọ bụ resin thermoplastic nwere ezigbo ndakọrịta na resins ndị ọzọ. Ọ na-eguzogide ọgwụ mbuze nke nje ma nwee adịghị ike hygroscopicity na ikuku. Polyethylene glycol 10000 - Standard Ngwaahịa a bụ ngwakọta nke ethylene oxide an ...
Polyethylene glycol 6000 na-akwado ya site na polymerization nke mmiri mmiri ethylene glycol na nnukwu okpomọkụ, nrụgide dị elu ma ọ bụ obere nsogbu. Polyethylene glycol 6000 (PEG-6000) Aha Bekee: macrogol 6000-992 ngwaahịa a bụ ngwakọta nke ethylene oxide na mmiri polycondensation, usoro ihe omimi bụ ho (CH2CH2O) NH, ebe n na-anọchite ọnụ ọgụgụ nkezi nke oxyvinyls. agwa Ngwaahịa a na-acha ọcha waxy siri ike flake ma ọ bụ granular ntụ ntụ, ubé smelly. Ngwaahịa bụ soluble na mmiri ma ọ bụ ethan ...
Polyethylene glycol 3350 - na-eji Poly (ethylene oxide) resin bụ akwa molekụla dị arọ homopolymer kụrụ site na mgbanaka mmeghe polymerization nke ethylene oxide site heterogeneous catalysis. A na-akpọ nke mbụ polyethylene glycol na nke ikpeazụ bụ polyoxyethylene. Polyethylene oxide (PEO) nwere njirimara nke flocculation, ndim, nwayọ nwayọ, lubrication, dispersion, njigide na njigide mmiri. O kwesịrị ekwesị maka ọgwụ, chemical fatịlaịza, papermaking, ceramik, detergents, cos ...
Polyethylene glycol nwere ihe dị iche iche na-adabere na ịdị arọ ya, site na mmiri na-enweghị ntụpọ na ísì ísì na-esi ike. Mgbe ihe omimi dị 200-600, ọ bụ mmiri mmiri na ụlọ okpomọkụ. Mgbe ngwugwu molekụl dị karịa 600, ọ na-eji nke nta nke nta ezu ike. Na iche nke nkezi molekụla ibu, Njirimara dịkwa iche iche. Site na mmiri na viscous viscous na-enweghị ntụpọ na mmiri siri ike. Site na mmụba nke ibu arọ, ihe hygroscopicity dec ...
Peg300 Polyethylene Glycol nke 300
A na-eji ọgwụ polyethylene glycol na polyethylene glycol fatty acid ester eme ihe n'ọtụtụ ebe na ihe ịchọ mma na ụlọ ọrụ ọgwụ. N'ihi ezigbo ihe onwunwe nke polyethylene glycol, mmiri solubility, na-abụghị nke na-agbanwe agbanwe, physiology inertia, dị nro, mmanu na wetting, anụ dị nro, mmetụta obi ụtọ na-eji mmetụta, wdg. polyethylene glycol na ọkwa dị iche iche dị arọ. Polyethylene glycol (Mr <2000) na relati ...
Peg-200: Enwere ike iji ya dị ka ọkara maka njikọta ahịhịa na onye na-ebu ọkụ yana ihe ndị ka elu. Enwere ike iji ya dị ka humectant, ihe mgbaze na-agbakwunye nnu inorganic na viscosity regulator na ụlọ ọrụ kemịkalụ kwa ụbọchị. Ejiri dị ka softener na antistatic gị n'ụlọnga na akwa ụlọ ọrụ; Mee ka wetting gị n'ụlọnga na akwụkwọ ụlọ ọrụ na pesticide ụlọ ọrụ. Ezigbo mmanu, mmiri, dispersibility, nrapado, ndị na-emegide antistatic na ndị dị nro; Ngwa: kemịkalụ kwa ụbọchị: ndị na-egbochi ihe ntacha eze, mmadụ ...